७ माघ २०७६ | January 21, 2020
जसले ठाउँको ठाउँ ‘बाघ’ लाई हराए
Friday, 19 Jul, 2019 10:19 AM
एकदिन टोलका दाइको जिब्रोबाट फुत्केका वाक्य थिए, ‘त्यस्तो स्कुलमा पनि के पढ्नु अब ! जुनचाहिँ राम्रो मास्टर छ, उसैलाई निकालिदिन्छ !’
त्यो बेला गणेश प्राथमिक विद्यालयमा कक्षा २ मा पढ्दै थिएँ । सन्तोष दाइ तत्कालीन भाषा निमावि (हालः भाषा क्याम्पस) मा निमावि तहको विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो । दाइको असन्तुष्टिको कारण रहेछ, ०३७ साल फागुन ५ गतेको । तत्कालीन भाषा निमावि, धनकुटा–२ पात्लेका प्रधानाध्यापक गोपाल गुरागाइँँको बर्खास्ती । प्रावि तहमा पढिरहेका स्याउलेका पूरै गुरागाईं खलक, अलि परको टोलका घिमिरेहरू, आठपहरिया राईहरू मात्रै होइन, वारि पात्लेकी मेनुका कार्की पनि गणेश प्राविमा पढ्न आइपुगे ।
गोपाल सरकै बुबा दिनानाथ गुरु पनि हाम्रै विद्यालयमा पढाउन आइपुग्नुभयो । गोपाल सरकी छोरी भारती र छोरा राजु त्रिवेणी निमाविमा स्थानान्तरित भए ।
दिनानाथ गुरु छोराको बर्खास्तीले सहनशीलशून्य भएर हामी पढिरहेको स्कुलमा सरुवा हुनुभयो होला भन्ठान्छु ।
हाम्रो घरको तत्कालीन भूमिगत मालेको आश्रयस्थलमा एउटा काठको बाकस थियो । त्यहाँ कतिपय गोप्य कागजात थिए । ती सबै एकाएक पढेको थिएँ । तीमध्ये एउटामा तत्कालीन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष रामसुन्दर यादव, उपाध्यक्ष कृष्ण ब्लोन र कोषाध्यक्षचाहिँ गोपाल गुरागाईं रहेको विवरण थियो । गोपाल सरसँगै तत्कालीन भारती मावि, चुङमाङका प्रधानाध्यापक रामसुन्दर यादव पनि बर्खास्तीमा पर्नुभएको हो ।
टुक्रा–टुक्रामा विभाजित थियो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी । गोपाल सरचाहिँ पूर्वको रातो झण्डा समूहमा हुनुहुन्थ्यो । टुक्रिएका समूह एकीकृत हुँदै जाँदा बन्यो कोअर्डिनेशन कमिटी अर्थात् कोके । कोकेका तर्फबाट धनकुटा छिन्ताङको अखुवाटारमा मदन भण्डारी एक्लै एकतावार्ता गर्न आउँदा रातो झण्डाका नेता आनन्दसन्तोषी राई हुनुहुन्थ्यो । उहाँ कोकेसँग मिल्नै चाहनुभएन, पूर्वकोशी प्रान्तीय कमिटीतिर लाग्नुभयो भने गोपाल, चित्र निरौला, वासु शाक्य, चन्द्र पुरी, जीवप्रसाद पोखरेलहरूचाहिँ पार्टी एकताको पक्षधर हुनुभयो ।
माले बन्नुअघि एकतावार्ताको अवस्था र मनमोहन समूह हुँदै आनन्दसन्तोषी राईको कांग्रेसमा प्रवेश एवं सक्रियता देख्दा स्पष्ट हुन्छ, त्यो एकतावार्ताको निर्णायक गोपाल सरलगायत हुनुहुँदो रहेछ । चित्र निरौलाले पञ्चायतकालमै पार्टी छाडी हाल्नुभयो र एनजीओ आईएनजीओ इत्यादिमा लाग्नुभयो, पञ्चायतकालकै समाजकल्याण परिषद्मार्फत ।
कमरेडहरूको पलायनको यो सिलसिलामा पनि गोपाल सर अविचलित रहनुभयो ।
त्यो देउसी भैलो
निकै ठूलो जमघट थियो हाम्रो घरमा त्यो रात । म कक्षा २ मा पढिरहेको बालकचाहिँ फुक्रुक्क फुक्रुक्क पुगिरहन्थें, यस्ता बैठकमा । गोपाल सरको प्रवेश भयो । करप्प हात मिलाउँदै मुसुक्क हाँसेर भन्नुभयो, ‘देउसी–भैलो खेलिने भैयो होइन त ?’
त्यसपछि रिहर्सल शुरु भयो, उहाँ हिँँडिहाल्नुभयो । मलाई पनि निद्राले छोप्यो ।
त्यो सालको तिहारमा एउटा भव्य टोली देउसी भैलोमा निस्क्यो, गीत क्रान्तिकारी, आशिष पनि क्रान्तिकारी । पुरुष–महिला सबै सरोबर गाउने बाजागाजासहित । लौरोटेकुवा देउसी भैलो टोली छायाँमा परे ।
किशोरावस्थाको जेल यात्रा
गोपाल सरले ७३ औं जन्मोत्सव यसै साता मनाउनुभयो । फेसबुकमार्फत यस अवसरमा बधाई र शुभकामना दिनेहरूलाई धन्यवाद प्रकट गर्नुभयो । एउटा सादगी जीवन बाँच्नेका लागि शुभजन्मोत्सव खासै हर्षाेल्लासको सन्दर्भ हुँदैन तर गोपाल सरले औपचारिकताका लागि धन्यवाद दिनुभएको हो भन्ठान्छु म ।
उहाँले पहिलोपटक तत्कालीन व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलनमा १९ वर्ष अर्थात् किशोरावस्थामै जेलयात्रा शुरु गर्नुभयो ।
२०२२ सालमा विद्यार्थी आन्दोलन भयो, स्ववियुको माग गर्दै । उहाँलाई थुनियो । कैद भुक्तानपछि फेरि आन्दोलन चर्कियो डिआईजी नारायण सिंह काण्डको नाममा । हालको राष्ट्रिय नाचघरमा कलाकारहरूको प्रस्तुति रहेछ, त्यहाँ धतुरिएर पुगेका डिआईजी नारायणले महिला कलाकारलाई दुव्र्यवहार गरेछन् । यसविरुद्ध आन्दोलन मच्चियो । यसमा पनि पिण्डेश्वर विद्यापीठ धरानका विद्यार्थी नेता गोपाल गुरागाईं गिरफ्तारीमा परिहाल्नुभयो ।
धनकुटा कागतेको घर बेचेर पात्लेखोलाको बेँसीमा झुपडी हाली बसेको बेला पनि प्रशासनले निहुँ खोज्दै दुःख दिन छाडेन र समातेर विराटनगरतिर चलान ग¥यो । त्यहीबेला पाख्रिबासमा एउटा काण्ड भयो । टिचिङ प्राक्टिसमा गएका गोपाल शिवाकोटी (हाल ः मानवअधिकारकर्मी डा. गोपाल शिवाकोटी) हरूले विद्यार्थीमा प्रगतिशील चेतना ल्याउन खोज्दा मण्डलेहरूले आक्रमण गरे । गोपाल शिवाकोटीहरूलाई साथ दिने धनकुटेलीहरू चन्द्र बस्नेत र अर्जुन राई (धनकटाका सभासद राजेन्द्र राईका सहोदर दाजु) पनि जेल परे । विराटनगर जेल चलान गर्दा गोपाल सरको ती कमरेडहरूसँग भेट भयो ।
संघर्षका चरण कहाँ सकिँदा रहेछन् र ! राष्ट्रिय पञ्चायतलाई सक्दो प्रयोग गर्ने नीति त पार्टीको छँदै थियो । सर्कुलर धनकुटाबाट तेह्रथुम पठाउनुपर्ने भयो । एक विश्वसनीय भेटिए तत्कालीन धनकुटा, साझामा काम गर्ने दयाराम भट्टराई । सर्कुलर दिएर उनको मावली जिल्ला तेह्रथुम खटाइयो । चेकजाँच कडा थियो । दयारामलाई बोकाएर पठाइएको सर्कुलरमा अँग्रेजीमा सीटीएम टीआरटी लेखिएको थियो । सानो चिर्कटोमा ओख्रेमा पढाइरहेका भोला गुरागाइँको नाम लेखिएको थियो ।
सर्कुलर लिएर जाने दयाराम जिरीखिम्तीमासमातिए भने भोला गुरागाइँलाई छाडेनन् । सीटीएम अर्थात् कमरेड तोयानाथ शंकाको घेराबन्दीमा पर्नुभयो । चरम यातनापछि पोल खोल्नुभयो र त्यो सर्कुलर काण्डमा गोपाल सरको प्रमुख हात छ भन्ने भइहाल्यो अनि सरलाई रातारात पात्लेखोलाका झुपडीबाट जिल्ला कारागार धनकुटा ल्याइयो ।
जुत्ता पनि लगाउन दिएनन्, दुष्टहरूले । दुई घण्टाजति राखे जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा । त्यहाँ एकजना इन्स्पेक्टर प्रस्तुत भए, विनयी । अन्य प्रहरीबाट ‘तँ’ संबोधन गरिएको बेला ती इन्स्पेक्टरले गोपाल सरलाई सौहार्द्रता प्रस्तुत गर्दै ‘तपाईं’ शब्द प्रयोग गरे ।
धनकुटाका तत्कालीन इन्स्पेक्टर लक्ष्मी वादे श्रेष्ठ हाल बनेपा नगरपालिकामा साविकको एमालेबाट निर्वाचित मेयर हुनुहुन्छ । यसबाट उहाँ उसबेलैदेखि वाम रुझानमा हुनुहुन्थ्यो भन्न सकिन्छ ।
गोपाल सरले गिरफ्तारीको बेला जुत्ता पनि लगाउन पाउनुभएन, चप्पलमा हुनुहुन्थ्यो । पैदलै तेह्रथुम चलान गराए । चित्रेपछि उता हिउँ परेको थियो ।
जेलबाट छुटेर गोपाल सरले साविक बेल्हारा गाउँ पञ्चायतको प्रधानपञ्च पदमा जनपक्षीय उम्मेदवारी दिई २५ वर्षदेखि एकलौटी प्रधानपञ्च खाइरहेका गंगाबहादुर जोशीलाई हराउनुभयो ।
पञ्चायतलाई अविछिन्न राख्न छिन्ताङका क्रान्तिकारीहरूको हुर्मत लिने सूर्यबहादुर थापालाई पनि ०४८ सालको आमनिर्वाचनमा भारी मतले क्षेत्र नम्बर २ बाट हराउनुभयो । दुई पटक झिनो मत भोगेको पराजय त अन्तर्घातकै कारण हो ।
०४८ सालको निर्वाचनमा गोपाल सरबाट पराजित भएपछि सूर्यबहादुर थापाले आफ्नो ‘भारदारी सभा’मा सामन्त स्वरमा कड्केर भनेछन्, ‘तिमीहरू मेरो जित ‘स्योर–स्योर’ भन्थ्यौ । आज एक जना गोठालोले मलाई हरायो ।’
थापाकाजीले भनेको एउटा कुरामा चाहिँ सही थाप्न मन लाग्यो, गोपाल सर गोठालो नै हो, नेपाली आन्दोलनको गोठालो, त्यसमा पनि नेपाली बाम आन्दोलनको गोठालो ।
एउटा प्रस्ताव राख्न चाहन्छु, उहाँ, धनकुटाको सर्वोच्च वाम नेता हुनुहुन्छ ।
सपना जो बीचैमा शहीद भयो
सस्तो श्रममा नेपालीलाई नै किन सेकिन्छ ?
​त्यो गोप्य कुरा र विश्वासको बात
​हाम्रो संवेदनशीलतासँग खेल्न नखोज
नेचर, कल्चर र सिग्नेचर
गोकर्ण बचत तथा ऋण सहकारीको आठौं बार्षिक साधारण सभा
गोकर्ण बचत तथा ऋण सहकारीले आफ्रानो सहकारीको आठौं बार्षिक साधारण सभा ओसिस पार्टी प्यालेसमा एक समारोह विच सम्पन्न गरेको छ ।
​एल.आई.सी. नेपालको ‘जीवन बचत’ योजना
“जीवन बीमासहितको खुसीको बचत, जीवन बचत” भन्ने सन्देशकासाथ एल.आई.सी. नेपालले ‘जीवन बचत’ नामक एकल बीमाशुल्क जीवन बीमा योजना बजारमा ल्याएको छ…
प्राइम कमर्सियल बैंकको वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न ।
एन आई सी एशिया बैंकको सपोर्ट सेवा २४ सै घण्टा सञ्चालनमा
​अर्काको चोरेर आफूखुसी आम्दानी
साथी फेर्न कति सजिलो
​दुई जोइ हुनेका दुखेसा
​‘अरिंगाल’ द्वारा सध्याउपर आक्रमण
निर्माताद्वारा कलाकारलाई नमज्जा
​आफूसँग क्षमता नभए कसरी जन्मन्छन् कलाकार
​यो यतिको सरकार हो कि केपीको ?
​कसलाई भाग्यो भन्दै हुनुहुन्छ ?
​सजग हुने संकेत आएको छ
​हाम्रा पति मारिने, हामी नै पीडक ठहरिने ?
​समय आएपछि मुख खोल्छु
​त्यसो भन्दा साथीहरुले मलाई हाँसेर उडाए
​नाम काटियो भनेर दुःख हुनुको के अर्थ ?
​पुरुषले कोही महिलासँग बोल्नै भएन अब
​दोषी को, दण्ड कति ?
​खान बोलाएर उल्टो खप्की
​ढोका थुनिँदा कति ठूलो धोका ?
​आदेश त्यस्तो, अप्ठेरो यस्तो
कमरेडको पैसा हरायो कता !
​राष्ट्रपति आउन अन्तिममा रोकावट
​ढोका खोल्ने, झ्याल टाल्ने, समाइहाल्ने
​कसैले कसे, कोही आफैं फसे
Marketing Managers :
Milan Thapa : 9851060339
Madhav Basnet : 9851021993
Dillibazar Height (Near to Trinity int'l college and Bhojan Griha)